” စစ် ” … ၏ အဓိပ္ပါယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” စစ် ” … ၏ အဓိပ္ပါယ်
” စစ် ” … ၏ အဓိပ္ပါယ်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 9, 2011 in Creative Writing | 16 comments
အင်္ဂလိပ်လို War ကို ဘယ်သူကများ “စစ်” လို့ မြန်မာပြန်ခဲ့သလဲ မသိပါဘူး။ စစ် ဆိုတာ စစ်မှန်ခြင်း၊ အစစ်လို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ပါတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် အတု အယောင်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။ စစ်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပြီဆိုရင် လူသားတွေ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီ သေဆုံးကြရတယ်။ အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးကြတယ်။ မိသားစုတွေ ရှင်ကွဲသော် လည်းကောင်း၊ သေကွဲသော် လည်းကောင်း ကွဲကွာကြရတယ်။ မျက်ရည်မိုးတွေ သွန်းဖြိုးကြရတယ်။ လူသားတွေ ဒုက္ခ ရောက်ကြရပါတယ်။ သုခမရှိ၊ ဒုက္ခအတိ ဖြစ်နေတာကို ကောင်းတယ်၊ မှန်တယ်၊ စစ်မှန်တယ်ဆိုပြီး “စစ်” လို့များ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြတာလား။
ကိုယ် ဒုက္ခမရောက်ရင်ပြီးရော၊ သူများတွေ ဘယ်လို ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့နေကြပါစေ၊ ဘယ်လောက် ဒုက္ခ ရောက်နေကြပါစေ၊ “ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော” စကားပုံနဲ့အညီ လိုက်နာ၊ ကျင့်သုံးကာ ဒီလောက် ဆိုးရွားလှတဲ့ အဖြစ်သနစ်ကြီးကို ကောင်းတယ်၊ ဆက်လုပ်ကြဆိုပြီး “စစ်” လို့ ခေါ်ဆို သမုတ်ခဲ့ကြတာလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မြန်မာလူမျိုးများဟာ ဒီလောက်အထိတော့ စိတ်ဓါတ် အောက်တန်းကျမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုထုဇဉ် လူသားတွေဆိုတော့လည်း ပြောလို့တော့ မရဘူးပေါ့လေ။
ကျွန်တော့် အထင်တော့ စစ် (အစစ်) ဆိုတာ “အဆစ်” ဆိုတဲ့ စကားက ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဆစ် ဆိုတာ အပိုတောင်းတာ၊ လူသားတွေရဲ့ မရောင့်ရဲနိုင်မှု၊ မတင်းတိမ်နိုင်မှု၊ ထပ်ဆောင်းလိုချင်မှု ဆိုတဲ့ လောဘ လွန်ကဲမှုရဲ့ အရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ လူသားတွေဟာ မိမိမှာရှိနေတဲ့ စည်းစိမ်၊ ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်သိန်တွေနဲ့တင် မရောင့်ရဲ့နိုင်ကြတော့ လောကကြီးကို အဆစ်တောင်းကြတယ်။ လောကကြီးကလည်း ပစ်မထားပါဘူး။ ထိုက်တန်သလောက်၊ သင့်တော်သလောက် ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေ ဆိုသလို လောဘအဆင့်ကနေ သမလောဘ အထိအောင် တက်လှမ်းကြတယ်။ သမ ရဲ့ ရှေ့မှာ ဝိ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ထပ်ဖြည့်လိုက်တော့ ဝိသမလောဘ ဖြစ်သွားရောပေါ့။ သမ ရဲ့ရှေ့မှာ ဝိ ထည့်ပြီး လောကကြီးဆီမှာ အလွန်အကျွံ အဆစ်တောင်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စစ်ပွဲများဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စတင် ဖြစ်ပွားလာပါတော့တယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး “အဆစ်” လို့ နာမည်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ခေတ်ကာလ ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဆစ် မှ ဆစ်၊ ဆစ် မှ စစ် လို့ ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
(ကျွန်တော့်ရဲ့ အထင်အမြင်ကိုသာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အထင်အမြင်ကိုလည်း သိပါရစေဗျာ။)
အဆစ် ဆိုတာလည်း အသုံးအနှုန်းတွေအများသား
အဲလိုတွေသုံးတာလဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ စစ်ဆိုတာ စစ်လို့ပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချင်တယ်
တဦးနဲ့ တဦး ညစ်ရာ ကနေ စစ် ဖြစ် သွားတာလား။
စစ်ပွဲဆိုတာ ကိုယ်က အစစ် သူကအမှန် လုပြီးငြင်းကျ ခုန်ကြတဲ့ ပွဲမို့ စစ်ပွဲလို့ခေါ်တာ ……… အစစ်လုပွဲ
စစ်ဆိုရင် အနော်ကတော့ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ရေစစ်ပဲ သိတယ်….
စစ် ဆိုတာက စစ်မှန်ချင်း ဖြစ်ရင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ.ဘာမှမပတ်သတ်ပါ။သူတို.က လိမ်တာများတယ်
ဆစ် ကနေဆင်းသက်လာတာဆိုရင်တော. မြန်မာစစ်တပ်က ပြည်သူတွေဆီကနေ ရလေလိုလေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ အမြင်လေးနဲ့ဒီပို့ စ်မှာပါတဲ့ ပုံနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေလို့ ဝင်မန်းလိုက်ဦးမယ်
တစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွဲ့တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ မတည့်တော့တဲ့အခါကျရင် အထက်လူကြီးတွေက “ပစ်” လို့ အမိန့် ပေးလိုက်ရော
ဟိုဘက် ဒီဘက် အောက်လက်ငယ်သားတွေအချင်းချင်း အထက်အမိန့် အရ ပစ်လိုက် သတ်လိုက်
မြေဇာပင်ဘဝနဲ့ အဆစ်ပါလိုက်ရသေး။ အဆင်ပြန်ပြေသွားတဲ့အချိန်အခါမျိုးလဲရောက်ရော
“အပစ်အခတ်ရပ်စဲလိုက်ပြီတဲ့” သေကြေပျက်စီး ဆုံးရှုံးသွားတာတွေကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့ မှပြန်အစားမရနိုင်ဘူး
ဒါကတော့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါဘဲ
အထက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကတော့ ပါးစပ်လေးစိုက်ရုံဘဲ အောက်ခြေပိုင်းမှာတော့အသက်ခန္ဓာတွေရင်းလိုက်ရတာ
စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုက အထက်လူကြီးအချင်းချင်း ပြဿနာမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းမယ်
ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အထက်ပိုင်းလူကြီးအချင်းချင်း ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း ပစ်ကြမယ်ဆိုရင်
ပြည်သူတွေရော အောက်လက်ငယ်သားစစ်သားလေးတွေရော အသက်ခန္ဓာ မစတေးရတော့ဘူးပေါ့
အရင်တုန်းကလို စီးချင်းထိုး ခိုင်းမလို့လား။
စစ် ဆိုတာ ဒေါသအားတွေ ကြီးပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မီးတွေပါပဲ..
အဲဒီ စစ်ဆိုတဲ့ စာလုံးအရှေ့မှာ ရေ ဆိုတဲ့ စာလုံး ခံလိုက်တော့ ရေစစ် ဖြစ်သွားတယ်။
ရေထဲက မကောင်းတဲ့ အရာတွေကို တားဆီးပေးတယ်။ အဲဒီမှာတင် စပြီး ကွဲလွဲတော့တာပဲ..
ခေတ်အဆက်ဆက် စီးပွားရေး နယ်ချဲ့ မှုများ အတွက်
ကိုယ့် စီးပွားနယ်မြေ သစ်များ ချဲ့ ထွင်ရန် အတွက် ကြေးစား များ ၀ါ စစ်တပ်များ နှင့် နယ်မြေအင်ပါယာ များ ချဲ့ ထွင်ခဲ့သည်
အစစ်ကို လုကြတဲ့ ရန်ပွဲ
ရန်ပွဲက ကြီးလာတော့ တိုက်ပွဲ
အစစ် လုတဲ့ တိုက်ပွဲ
စစ်ဖြစ်တာ မောဟကြောင့်ပါ။ လောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်တာ မသိမှု မောဟဖုံးနေလို့လေ။
ဒီတော့ အန်တီဆူးရော အန်တယ်ကြီးရောထက် ကြောင်ကြီး ပိုသာတယ်မှတ်…. :eek:
စစ် ဆိုတဲ့ စကားဘယ်က ဆင်းသက် လာသလဲတော့ မလေ့လာဖူးပါဘူး။
သေချာတာကတော့ စစ်ပွဲ ဆိုတာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ စစ် ပွဲ အသေး စားမျိုး သုံး ပွဲ ကြုံဖူးပါတယ်။
သူပုန်နဲ့ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်တာပေါ့။
အများဆုံး သေတာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်၇ာရတာက ပြည်သူလူထုတွေပဲ။
လက်နက်ကိုင် က တစ်ယောက် သေ ရင် ပြည်သူ ဆယ်ယောက်လောက်သေတာပဲ။
ကိုငြိမ်းချမ်း ရေးထားတာကောင်းပါတယ်။ စစ်ပွဲဆိုတာက တော့ ငယ်သားတွေ စစ်သားတွေ အသက် ပေး နေရပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ လေပဲ ပေးကြတာ။ တိုက်ရင်း လုပ်ရင်း နဲ့အပေး အယူ တဲ့ပြီး ဘာနဲ့ ဘာနဲ့ လဲလိုက်ကြ ၊ တည့်သွားကြရော။ သူပုန်တွေကလဲ အလင်းထဲရောက် လာ ရင် မြှောက်ကြွ မြှောက်ကြွနဲ့ ဘာမှကို အရေးမစိုက်ဘူး၊ အဲ့ဒါတွေရဲ့ အတိတ် မှာတော့ သေတဲ့လူ ဘ၀ ပျက် တဲ့လူ များစွာ၊ မိသားစု များစွာ ကျန်ခဲ့ကြတယ်။
စစ် ဆိုတာ မတဲ.တဲ.လူတွေ ရန်ဖြစ်တာများ ….လွယ်လွယ်လေး